24-saac ugu dambeeyay iyo qodoba Sports-ka ugu xiisaha badnaa halkaan ka aqriso – Filimside.net
24-saac ugu dambeeyay iyo qodoba Sports-ka ugu xiisaha badnaa halkaan ka aqriso
Maalin wanaagsan aqristayaasha qiimaha badan ee shabakada Filimside ku xiran halkan kaga bogo 24-saac ugu dambeeyay iyo qodoba Sports-ka ugu xiisaha badnaa si aan aqristayaasheena uga haqabtirno ogaanshaha dhacdooyinka Sports-ka ugu xiisaha badnaa 24-saac ugu dambeeyay:
Qodobka 1-aad: Huesca 0-0 Barcelona: Barca ayaa haatan hogaanka La Liga 9-dhibcood ku heyso waxaana ka harsan 6-kulan horyaalkan.
Qodobka 2-aad: Man United 2-1 West Ham: Paul Pogba labo gool ku laad uu dhaliyay ayaa United ka caawisay inay guul muhiim ah ka helaan West Ham sidoo kalena kaalinta 5-aad ayay United usoo dalacday.
Qodobka 3-aad: SPAL 2-1 Juventus: kooxda Juve ayaa guul daro lama filaan ah la kulantay waxaana dib loo dhigay inay u dabaal dagaan hanashada Serie A-da markii 8-aad oo xariir ah
Qodobka 4-aad: Tottenham 4-0 Huddersfield: Lucas Moura sedexleey uu dhaliyay ayaa ka caawisay Spurs inay kaalinta 3-aad EPL u dalacaan.
Qodobka 5-aad: Dortmund 2-1 Mainz: Sancho labo gool uu dhaliyay ayaa dib ugu soo celisay Dortmund hogaanka Bundesliga waxayna labo dhibcood kaga hayaan Bayern oo kulan baaqi u yahay.
Qodobka 6-aad: AC Milan 1-0 Lazio: Kessie gool ku laad uu dhaliyay ayay Milan kusoo gashay booska 4-aad ee Serie A-da Talyaaniga.
Qodobka 7-aad: Barcelona ayaa ku guuleesteen saxiixa De Ligt wuxuuna aqbalay inuu u saxiixo heshiis gaarayo ilaa 2024 sidoo kalena kooxda Ajax waxaa lagu wareejin doonaa 60m oo euro ah.
Qodobka 8-aad: Macalin Jose Mourinho ayaa wada hadalo la yeeshay kooxda Lyon si uu xagaagan tababare kowaad ugu noqdo madaama Lyon macalinkeeda Bruno Genesio xagaagan kooxda isaga tagaayo.
Qodobka 9-aad: Juventus ayaa iska iibineyso Dybala si ay lacago ugu hesho soo qaadashada wiilka ay isku heestaan kooxaha Yurub ugu caansan kana tirsan naadiga Benfica Joao Felix.
Qodobka 10-aad: Barcelona ayaa qorshaha ku darsatay xagaagan inay soo qaadato cayaaryahan Willian oo ay horey saxiixiisa ugu guul dareesteen.
Qodobka 11-aad: Man United ayaa u bandhigtay Ander Herrera heshiis 4-sano ah iyo sidoo kale mushaarkiisa 120,000 oo pound uu haatan qaato loo laba laabo, balse wakiilkiisa wuxuu hor dhigay maamulka kooxda xujo ah heshiis 5-sano iyo 300,000 oo pound ka badan todobaad walbo la siiyo 29-jirkan.
Qodobka 12-aad: Man City ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa Wan-Bissaka oo 21-jir ah sidoo kalena kooxdiisa Crystal Palace ku dooneyso 40m oo pound.
Qodobka 13-aad: Inter Milan ayaa iska dhaaftay qorshihii ay Rakitic soo qaadan laheyd waxayna badalkiisa xagaagan soo qaadaneysaa Gundogan oo Man City khadka dhexe uga cayaaro.
Qodobka 14-aad: Man United ayaa u balan qaaday Christian Eriksen 240,000 todobaad walbo inuu qaato waana afar laab lacag ka badan mushaaraadka uu haatan Spurs ka qaato.
Qodobka 15-aad: Bayern Munich ayaa 50m oo euro ah ku dooneyso Nicolò Zaniolo oo khadka dhexe kaga cayaaro kooxda AS Roma.
Qodobka 16-aad: Arsenal ayaa gacanta ku dhigi rabto Toby Alderweireld oo daafaca uga cayaaro Spurs waxayna ku heli karaan 25m oo pound waana lacagaha qandaraaskiisa halka sano ka harsan lagu jebin karo.
Qodobka 17-aad: Kulamada xiisaha badan ee maanta laga cayaarayo 5-horyaal Yurub ugu caansan waqtiga ay soo galayaan waa xiliga geeska Afrika:
4:05 pm Crystal Palace vs Man City
6:30 pm Liverpool vs Chelsea
4:30 pm Dusseldorf vs Bayern
9:30 pm Frosinone vs Inter
10:00 pm Lille vs PSG
Waxaa Aqrisay 611